नेपालमा अक्सफोर्डको कोरोना भ्याक्सिनको मूल्य मात्रै ३६० रुपैयाँ ! बिल गेट्सले मूल्य घटाइदिए – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/नेपालमा अक्सफोर्डको कोरोना भ्याक्सिनको मूल्य मात्रै ३६० रुपैयाँ ! बिल गेट्सले मूल्य घटाइदिए
सिरम इन्स्टिच्युटका सीइओ अदर पूनावालाले भनेका छन् ‘भाइरसको व्यापक प्रसारले पूरै विश्वलाई अनिश्चिततामा पारेको छ । पूरै विश्वमा खोप अभियान चलाउन र महामारी रोक्नको लागि विश्वका सबैभन्दा दूरदराज र गरिब देशहरुमा सस्तो उपचार र निवारक उपायमा पहुँच सम्भव होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु निकै महत्वपूर्ण छ । यो सहकार्यको माध्यमबाट हामीले यो भयानक संक्रमणबाट लाखौंको जीवन बचाउन आफ्ना निरन्तर प्रयासलाई पूरा गर्न चाहन्छौं । अक्सफोर्डको भ्याक्सिनले गत हप्ता भारतमा दोस्रो र तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति पाइसकेको छ ।
१० दिनमै कोरोनालाई परास्त गरे पिएसजीका स्टार नेयमारले भने ‘म एकदमै खुशी भएको छु’
ए’कै मा’निस’का १३ श्री’मती, ती पनि ए’कै’साथ ग’र्भव’ती !